192.168.8.1 - Login Login
IP adiresy 192.168.8.1 dia adiresy ip manokana ao anatin'ny tamba-jotra eo an-toerana, ianao ihany no afaka mampiasa ity adiresy IP ity ary tsy azo ampiasaina amin'ny Internet. Azonao atao ny mampiasa ity adiresy IP ity 192.168.8.1 noho ny fanokafana ny tontonana admin admin ary fanovana vitsivitsy amin'ireo fampiasa mahazatra. Ny vitsivitsy amin'ireo fanovana ireo dia misy ny fanovana ny teny miafina sy ny anaran'ny mpampiasa, ny fametrahana ny tamba-jotra, ampio ny firewall, ary ny fametrahana ny fitaovana
IP 192.168.8.1 dia ampiasaina amin'ny fifandraisana amin'ny rafitra isan-karazany ao anaty tambajotra tsy miankina. Izy io dia ampiasaina amin'ny fanamafisana ny fitaovana an-tambajotra amin'ny alàlan'ny fampidirana ny paositra fidirana.
Ampifanaraho ny Router amin'ny alàlan'ny 192.168.8.1
Aorian'ny nidiranao tao amin'ilay interface router tamin'ny 192.168.8.1, tonga ny fotoana hanovana ireo toe-javatra hahalalanao ny safidinao voalohany. Ny tadin'ireo isa sy fanafohezana goavambe dia mety ho toa tsy azo hatonina, saingy mety hiala sasatra mora ianao amin'ny fahafantarana fa mety hamerina indray ny toerana rehetra alehanao amin'ny alàlan'ny tsindry bokotra iray. Fa manampy ny fahalalana hoe aiza no hanombohana; noho izany ny zavatra lehibe indrindra tsy maintsy ovainao dia ireo antsipirian'ny fidirana etsy ambony voalaza etsy ambony ireo:
Safidio ny fikirana ankapobeny menio
Safidio ny tenimiafin'ny router na safidy toy izany koa
Soraty ny teny miafinao tianao
Tehirizo ny fanovana.
Tsy maintsy mahazo ny solonanarana amin'ny router amin'ny menio mitovy amin'izany ianao, afaka manova ny anaran'ny safidinao voalohany.
Ovao ny adiresy IP eo an-toerana 192.168.8.1
Ny toerana iray hafa azonao irariana hanovana dia ny adiresy IP eo an-toerana an'ny router, miaraka amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny adiresy IP ampahibemaso sy eo an-toerana voalaza etsy ambany. Raha manova ny adiresy IP eo an-toerana an'ny router ianao, tsy ho fantatrao ny fomba hidiranao amin'ny router amin'ny 192.168.8.1, noho izany dia mila manamafy ianao fa hahatadidy ny adiresy farany nataonao. Hanova ny adiresy:
Tsidiho ny menio fanomanana na safidy mitovy anarana
Kitiho ny fikirana tambajotra safidy.
Etsy ambany ny faran'ny router, manorata amin'ny adiresy IP tianao
Mitahiry ireo fanovana
Ny iray amin'ireo adiresy IP misy anao dia 192.168.8.1, fa tsy toy ny 192.168.0.1 or 192.168.1.1 tsy dia matetika ny orinasa no mampiasa an'io adiresy anatiny io. Ara-dalàna raha milaza fa saika ny rehetra tsy mampiasa azy. Raha tsorina dia tsy mifanaraka amin'izy ireo ity zavatra ity, satria manana fampiasa mitovy amin'izany izy ireo - ampiasaina amin'ny fidirana amin'ny tranonkala amin'ny router.
Manova ny anaran'ny tamba-jotra Wi-Fi
Amin'ny alàlan'ny fanovana ny tena router novaina dia azonao atao ny manomboka mahita fanampiny amin'ny anaran'ny tambajotran'ny Wi-Fi ny router ho toerana mamiratra hanombohana. Ny Service Set Identifier na SSID dia anarana manasaraka ny tamba-jotra Wi-Fi an'ny router amin'ny olon-kafa akaiky azy. Mety ho zavatra irinao ilay anarana raha tsy mahatezitra izany. Amin'ny alàlan'ny default, mety ho mahazatra matetika ilay anarana, mba hanampiana hanavaka ny tambajotra tokony hataonao:
Tsidiho ny menio fanomanana hafa, mitovy amin'ny safidy nomena anarana
Tsindrio ny safidy tsy misy tariby.
Soraty ao anaty boaty SSID ireo anaran'ny tambajotra tianao
Aorian'ny fanovana ny anaran'ny tamba-jotra Wi-Fi dia mety manamboatra tenimiafinao mihitsy aza ianao. Ny boaty tenimiafina dia ho eo amin'ny menio mitovy amin'ny anaran'ny tamba-jotra.
Ny fametrahana eo amboniny dia hamela anao handamina ny filaminan'ny router izay ilaina mba hahazoana antoka fa misy olona mizaha ny harato amin'ny alàlan'ny tamba-jotra manao izany soa aman-tsara. Avy eto, tongasoa anao ny hahita bebe kokoa ny safidin'ny router. Mpandeha maro no miaraka amin'ny toerana misy ny ray aman-dreny azonao amboarina, ary vitsy ny mamela ny fananganana tambajotra maromaro na serivisy VPN.
Misimisy kokoa ao amin'ny IP 192.168.8.1
192.168.8.1 Ity dia antsoina hoe vavahady, tsy miankina na adiresy IP eo an-toerana izay heverina ho tampon'ny tamba-jotra Wi-Fi. 192.168.8.1 Mahazo ampiasaina amin'ny fidirana amin'ny interface ny router ary ahafahan'ny fitaovana mahazaka harato mampifandray amin'ny router. Azonao atao ny mihevitra ny adiresy IP an'ny router anao ho PO Box ho an'ny mailaka. Ny fonosana rehetra azonao amin'ny alàlan'ny paositra dia mankany amin'ny PO Box, na dia tsy hanangona aza ianao, ny router dia handefa ny paositra amin'ny fitaovana PC izay mitaky izany.
Raha ianao no tompon'ny fitaovana miaraka amin'ny Lisitra IP & 192.168.8.1 dia adiresy tsy mety, hahita varavarankely fidirana ianao raha vao manoratra azy ao amin'ny baran'ny adiresin'ny browser. Avy eo ianao dia mila tsotra fotsiny ny mampiasa ny solonanarana sy tenimiafinao default.
Famahana ny olana amin'ny adiresy IP 192.168.8.1
Amin'ny fotoana sasany, mahazatra ny miatrika olana isan-karazany amin'ny router. Raha tsy afaka mandalo ny efijery fidirana ianao dia misy singa vitsivitsy ilainao handinihana. Hamarino mba hanamafisana fa mitombina ny Internet fa tsy miovaova. Safidy iray hafa ny fampiasana ny Command prompt mba hamaritana ny vavahady misy anao. Mety mampiasa adiresy IP tsy mety ianao amin'ny fidirana amin'ny interface interface. Raha mila fanampiana bebe kokoa ianao dia mety hifandray amin'ny mpamatsy Internet anao mihitsy aza.
Misy fepetra sasany tokony harahintsika mba hidirana amin'ity adiresy IP ity ary hanao ny fanovana ilaina. Ny tena zava-dehibe dia ny hoe eo amin'ny manodidina ny tambajotran'ny router na miditra fotsiny. Ny faneriterena lehibe indrindra amin'ity adiresy IP ity dia ny tsy hita ao amin'ny WWW ary noho izany dia manery antsika ho eo amin'ny faritry ny tambajotran'ny router izy io mba hanatonana ny interface interface. Ny navigateur web dia tokony ho sarotra (Google Chrome, Mozilla Firefox, sns.) satria mila fanohanana HTML5 pop-up ity fomba ity.
Raha mpitantana ny mpampiditra ny adiresy IP ianao 192.168.8.1 avy eo amin'ny alàlan'ny fampiasana ny adiresy IP 192.168.8.1, afaka manao fanovana takiana amin'ny router ianao ary manova ny toerana misy anao aza.
Ankoatr'izay, azonao atao ny manampy fanampiny amin'ity adiresy IP ity toy ny fanovana ny anarana mpampiasa, ny teny miafina, ny fanaraha-maso ny fikirakirana ny tambajotra, ny fikirakirana firewall & maro hafa.
Ireto misy sasantsasany amin'ireo fiasa malaza amin'ny adiresy IP 192.168.8.1.
Manova ny teny miafina sy ny mpampiasa.
Fifehezana ny fametrahana QoS & Network.
Fanakanana & fanakanana ny fitaovana farany.
Mametraka fametrahana Firewall & Security
Modely Wifi vahiny.
Ary mihoatra noho izany.
Azonao atao ny manova sy manova ireo toe-javatra ireo aorian'ny nidiranao ao amin'ny pejin-tranonkala admin an'ny router-nao izay an'ny adiresy IP 192.168.8.1. Ary hiditra amin'ny adiresy IP 192.168.8.1, dia mila manoratra amin'ny adiresy IP adiresy http://192.168.8.1 ny navigateur na tsindrio raha te-hijery ny fanohanan'ny admin ny router anao amin'ny adiresy IP 192.168.8.1.
Tsy maintsy amboarinao indray ny router-nao mba hampiasana mora kokoa. Misy toe-javatra hafa azonao apetraka ao amin'ny tontonana fitantanana ny router. Azonao atao ny mianatra bebe kokoa amin'ny Internet interface.
Lisitry ny Username sy Password ho an'ny 192.168.8.1
HUAWEI TMAR # HWMT8007079 (Tsy misy)
HUAWEI mpampiasa mpampiasa
Sokajy routerips Leave a comment
Lisitra tenimiafin'ny router mahazatra
Lisitry ny adiresy Ip
2wire ny router Login
Login ny router Asus
Login amin'ny router Router
Comtrend ny router Login
D-rohy fidirana amin'ny Router Login
ZyXEL ny router Login
firy taona aho izao